Madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo olole nadaafadeed ka sameeyay jidadka soo gala wasaaradda – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo olole nadaafadeed ka sameeyay jidadka soo gala wasaaradda
By Ciise Cabdi Ciise on 25/10/2018 No Comment
Qamiis, October, 25, 2018(HNN) Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Feysal Cumar Guuleed iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarshada ayaa maanta olole nadaafadeed ka sameeyay jidadka soo gala dhismaha wasaaradda waxbarashada ee magaalada Muqdisho.
Ololahan nadaafadda ayaa mid ah mid kor loogu qaadayo bilicda agagaarka dhismaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarshada mudane Feysal Cumar Guuleed ayaa shaqaalaha wasaaradda ku dhiri galiyay in maalin kasta oo khamiis ah ay fuliyaan ololahan nadaafada kor loogu qaaday bilicda.
“Ololahan nadaafadeed waa mid muhiim ah oo u baahan in laga wada shaqeeyo dhammaanteen,waxaan idinku dhiri galinayaa in maalin kasta oo khamiis ah sidan oo kale ololahan uga sameysan goobaha ku hareereysan dhismaha wasaaradda, si kor loog qaado bilicda”ayuu yiri wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa marka laga soo tago inay dadaal ugu jirto horumarinta waxbarashada dalka door muhiim ah ka qaadaneysa dib u soo celinta bilicda caasimadda.
Madaxda iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada oo olole nadaafadeed ka sameeyay jidadka soo gala wasaaradda added by Ciise Cabdi Ciise on 25/10/2018